Izindaba - I-Delta ithi amadrayivu ayo e-Asda-A3 servo alungele amarobhothi
I-Delta ithi uchungechunge lwayo lwe-Asda-A3 lwamadrayivu e-AC servo enzelwe izinhlelo zokusebenza ezidinga impendulo enesivinini esikhulu, ukunemba okuphezulu kanye nokunyakaza okushelelayo.
I-Delta ithi amandla okunyakaza okwakhelwe ngaphakathi kwedrayivu “alungile” kumathuluzi omshini, ukukhiqiza izinto zikagesi, amarobhothi nemishini yokupakisha/yokuphrinta/yendwangu.
Inkampani yengeze ngokuthi i-Asda-A3 iyazuza esicini sokufaka ikhodi esiphelele esihlinzeka ngokusebenza okuhle kakhulu kanye nempendulo yefrikhwensi engu-3.1 kHz.
Lokhu akunciphisi isikhathi sokusetha kuphela, kodwa futhi kukhulisa kakhulu umkhiqizo ekulungisweni kwe-24-bit.
Lokho kungu-16,777,216 pulses/revolution, noma ama-pulses angu-46,603 wedigri engu-1. Izihlungi ze-Notch ze-resonance kanye nemisebenzi yokucindezela ukudlidliza zifaka isandla ekusebenzeni kahle komshini.
Isofthiwe esebenziseka kalula enesithombe esibonakalayo kanye nokushuna okuzenzakalelayo kunciphisa isikhathi sokusebenza futhi kwenze kube lula ukuqaliswa.
Ngaphezu kwalokho, umklamo ohlangene we-Asda-A3 series servo drives unciphisa kakhulu indawo yokufaka futhi wenze kube lula ukuhlelwa kwikhabhinethi yokulawula.
I-ASDA-A3 futhi ihlanganisa izici ezithuthukisiwe zokulawula ukunyakaza ezifana ne-E-CAM (elungiselelwe kahle izikere ezindizayo nezishekeli ezijikelezayo) kanye nezindlela zokulawula ze-PR ezingu-99 eziyinkimbinkimbi zokunyakaza okuguquguqukayo kwe-axis eyodwa.
I-Asda-A3 ihlinzeka ngomsebenzi omusha wokucindezela ukudlidliza kanye nesofthiwe yokuhlela ye-Asda-Soft okulula ukuyisebenzisa ukuze abasebenzisi baqedele ngokushesha umsebenzi wokuzishuna we-servo.
Uma usebenzisa izinto ezinwebeka kakhulu njengamabhande, i-Asda-A3 iqinisa inqubo, ivumela abasebenzisi ukuthi bamise imishini yabo ngesikhathi esincane sokuzinza.
Amadrayivu e-servo amasha ahlanganisa izihlungi ze-notch ezizenzakalelayo zokucindezelwa kwe-resonance, ukucinga ama-resonances ngesikhathi esincane ukuvimbela ukulimala komshini (amasethi ama-5 wezihlungi ze-notch ezinomkhawulokudonsa oguquguqukayo namabhendi wokuvama afika ku-5000 Hz).
Ngaphezu kwalokho, umsebenzi wokuxilonga wesistimu ungabala ukuqina komshini nge-coefficient ye-viscous friction kanye ne-spring constant.
Ukuxilongwa kunikeza ukuhlolwa kokuvumelana kwezilungiselelo zemishini futhi inikeze idatha yesimo sokuguga phakathi nesikhathi sonke ukuze kuhlonzwe izinguquko emishinini noma kumishini yokuguga ukusiza ukunikeza izilungiselelo ezifanele.
Iphinde iqinisekise ukulawulwa kweluphu evalwe ngokugcwele yokunemba kokuma futhi isuse imiphumela yokuhlehla.Idizayinelwe i-CanOpen ne-DMCNet enomsebenzi owakhelwe ngaphakathi we-STO (i-Safe Torque Off) (isitifiketi silindile).
Uma i-STO icushiwe, amandla emoto azonqanyulwa.I-Asda-A3 incane ngo-20% kune-A2, okusho ukuthi indawo yokufaka encane.
Amadrayivu e-Asda-A3 asekela ama-servo motors ahlukahlukene.Iqinisekisa ukwakheka okuhambisanayo kwemoto ukuze kufakwe esikhundleni sesikhathi esizayo.
I-ECM-A3 yochungechunge lwe-servo motor iyinjini ye-AC servo motor enembayo ephezulu, engasetshenziswa nomshayeli we-servo ongu-200-230 V Asda-A3 AC, futhi amandla angawakhetha ukusuka ku-50 W ukuya ku-750 W.
Amasayizi ozimele wezimoto angu-40 mm, 60 mm no-80 mm. Amamodeli emoto amabili ayatholakala: I-ECM-A3H inertia ephezulu kanye ne-ECM-A3L inertia ephansi, ilinganiselwe ku-3000 rpm. Isivinini esiphezulu ngu-6000 rpm.
I-ECM-A3H inetorque engu-0.557 Nm kuya ku-8.36 Nm kanti i-ECN-A3L inetorque engu-0.557 Nm kuya ku-7.17 Nm
Ingase futhi ihlanganiswe ne-Asda-A3 220 V yochungechunge lwama-servo drives ebangeni lamandla ukusuka ku-850 W ukuya ku-3 kW.Osayizi bamafreyimu abatholakalayo ngu-100mm, 130mm no-180mm.
Izilinganiso ze-torque ezizikhethela ziyi-1000 rpm, 2000 rpm no-3000 rpm, isivinini esikhulu esivela ku-3000 rpm no-5000 rpm, kanye nama-torque angu-9.54 Nm kuya ku-57.3 Nm.
Ixhunywe ekhadini lokulawula ukunyakaza le-Delta kanye nesilawuli esizenzekelayo esihlelekayo i-MH1-S30D, isistimu yomugqa yokushayela ye-Delta inganikeza izixazululo ezifanele zezinhlelo zokusebenza zokulawula ukunyakaza kwama-axis amaningi ezimbonini ezishintshayo ezishintshayo.
I-Robotics ne-Automation News yasungulwa ngoMeyi 2015 futhi manje isingesinye sezindawo ezifundwa kakhulu zalolu hlobo.
Sicela ucabange ukusisekela ngokuba ngobhalisile okhokhelwayo, ngokukhangisa noxhaso, noma ngokuthenga imikhiqizo namasevisi ngesitolo sethu - noma inhlanganisela yakho konke okungenhla.
Le webhusayithi kanye nomagazini abahlobene nayo kanye nezincwadi zezindaba zamasonto onke kukhiqizwa ithimba elincane lezintatheli ezinolwazi kanye nochwepheshe bemidiya.
Uma uneziphakamiso noma ukuphawula, sicela ukhululeke ukusithinta kunoma yimaphi amakheli e-imeyili ekhasini lethu lokuxhumana.
IMitsubushi HMI ILogic Controller Plc IServo Motor IAc Servo Drive 1kw Servo Motor Delta HMI